हे दैव, गुल्मीमा किन यति धेरै पर पुरुष गमनका काण्ड घट्छन् ? | ebaglung.com
२०७५ श्रावण ३१, बिहीबार १५:०६	Top News, थप समाचार, विविध
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७५ साउन ३१ । मंलवार विहान परपुरुष गमनका क्रममा आफ्नै १३ वर्षिय छोराले देखेपछि भ्याई नभ्याई नग्न शरीर छोप्दै कोठाबाट भागेकी एक महिला अहिले सम्म सम्पर्क विहिन छन । श्रीमान घर नभएको बेला र छोरा कोठा देखि बाहिर हिडेको बेला एक जना डाईभर संग सदरमुकाम तम्घासको धागिथुम स्थित डेराबाट भागेकी गुल्मीदरवार गाउँपालिका–२ कि महिला हुन उनी ।
त्यहाँ डेरा गरी बस्ने हिरा बहादुर बिश्वकर्मा (नाम परिवर्तित)की श्रीमती मंगलबार विहान करिव ९ बजेको समयमा त्यस्तो अवस्थामा फेला परे्पछि उनका ती १३ बर्षिय छोराले सहन नसकेर ती ड्राईभरलाई कुट्न कस्सिए । तर उनिहरु दुबैजना भाग्न सफल भए । उनि सहित तिन जना वालवालिकाहरु यति वेला बिचल्लीमा परेका छन । श्रीमतीको त्यस्तो चर्तिकलाको खवर पाएपछि घर आएका बिक विहिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा श्रीमती हराएको उजुरी दिन आई रहेका थिए ।
पछिल्लो चरण उनै श्रीमतीले म त्यसै शान्तिपुर तिर गाडी चलाउने ड्राईभर संगै छु भन्ने खबर पाएको उनि बताउँछन ।
माहिला बालबालिका सेलको भित्तामा थुप्रै देखिन्थे श्रीमती हराएका सुचनाहरु । केहि नालीका छोरहरु हराएका सुचना पनि देखिन्थ्यो । उता श्रीमान विदेश भएकी दर्लामचौर कि सकिला ( नाम परिवर्तन ) क्षेत्री पनि एक जना डाईभर संग कोठामा रंङ्गेहात फेला परिन । अर्को घरबाट उनकी सासुले ढोका खोल्न लाग्दा डाईभरलाई नाङ्गै पलङ्गमुनी लुकाईन । तर के गर्नु ? पाप धुरीबाट कराई हाल्छ । सासुले ती ड्राईभरको पाईन्ट भने माथी पलङ्ग मै फेला पारिन् ।
त्यस पछि कसैले भाग भन्न परेन उनलाई । उनि आफै लज्जीत हुँदै भागिन एक बर्षको सन्तान छाडेर । अहिले ती सन्तानको पनि विचल्ली छ । मुसिकोट नगर पालिका–३, बडागाउँ मैदानका बाबुराम बिककी श्रीमती पनि ६ महिनाको सन्तान बाटैमा छाडेर डेढ महिना अघि भागेकी हुन । उनका सन्तानको विचल्ली देख्दा आँखा नरसाउने कोही छैनन ।
गुल्मी हस्तीचौरमा दुई वटी श्रीमति भई सकेका एक पुरुष त्यो पनि हाडनातामा तेश्रो श्रीमती बनेर हालै एउटी महिला भित्रिएको खवरले त्यो गाउँमा निकै चर्चा पाएको छ । केहि दिन अघि रेसुङ्गा नगरपालिका–६ अर्खलेमा नजिकको हाडनाताकी वहिनी संग जवरजस्ती करणी उद्योगमा एक जना पुरुष पाल्पा प्रहरीबाट समातिएका छन ।
१३ लाख नगद पनि छैन श्रीमति पनि छैन
मलेशियाबाट बाबुको क्रिया क्रम गर्न घर आएका रेसुङ्गा नगरपालिका–६, चेक्मी हर्राचौरका फर्शबहादुर पुन मगर पनि विहिवार विहान नै श्रीमती हराएको उजुरी लिएर सोही कार्यालयको मुद्दाफाँटमा पुम्पुरोमा हात लगाउँदै बसी रहेका थिए । उनका जेठा छोराले समेत नाती जन्माएका छन । कक्षा १२ मा पढ्दै गरेकी उनकी एउटी छोरीले जेठ १५ गते आत्महत्या गरिन । आमा त्यस अघि नै घरबाट बेपत्ता भईन ।
एक छोरा तिन छोरीले उच्च शिक्षा हाँसिल गरेका श्रीमानले मलेशियामा मसिक ४५ हजार कमाउँदै आएका । बर्षको एक चोटी घर आउने गरेकै थिए । आखिर नपुग के नै थियो ? तर बिगा¥यो यौन विचलनले । उनले घर छाडिन । कारण त्यति मात्रै थिएन । आर्थिक हिनामिना पनि थियो । पत्नी पीडित मगर भन्छन–‘ तिन तोला सुनका गहना र मलेशियाबाट पठाएको १३ लाख रुपैयाँको टुङ्गोबुङ्गो छैन । उनि थप्छन –‘घर नआउनु अघि करिव ८ लाख पठाएको थिएँ । त्यसको समेत हिसाव किताव छैन । उल्टै केहि पसलहरुमा ऋण लगाई दिएर हिडिछ । ’
उनले बैदेशिक रोजगारमा काम गर्दाको असिना पसिना र यता श्रीमतीको विचलनको पिडा थप सुनाउँदै भने–‘६ बर्ष कतारको घाम खाएर कमाएर पठाउँथे , अहिले ६ बर्ष देखि मलेशियामा काम गर्दै आएको थिएँ, घर आउँदा कम्तीमा १३ लाख नगदको टुङ्गो नहुँदा ठुलो पीडामा छु, रोउँ कि हाँसौं भएको छु । १२ वर्ष बैदेशिक रोजगारको कमाई मेरो खेर गयो । ’
उनि ४० वर्षका भए भाग्ने उनकी श्रीमती ४२ बर्षकी भईन । हजुर आमा बनेकी उनि दर्लामचौरका एक कुमाल समुदायका विवाहित पुरुष संग गएको उनको ठम्याई छ । जुन कुरा ती पुरुषकी जेठी श्रीमतिले त्यसै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए पछि पत्तो पाएको मगर बताउँछन । उनका दाजु रुद्रबहादुर पुन मगर भन्छन–‘ हामी छुट्टभिन्न भएर बसेकोले उनी बुहारीका बारेमा खासै चियो चर्चो गर्ने कुरा भएन । घरमा मानिसहरु आई रहन्थे केटाकेटीले सोध्धा भाई आएको भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो । बजार आवत जावत पनि बढेको थियो । ’
श्रीमानले पठाएको पैसा झिक्न सदरमुकाम तम्घासमा आउने कतिपय महिला वियरको बोत्तल सहित भेटिन्छन । त्यो भन्दा सुरक्षित गन्तव्य बनेको छ बुटवल नगरी । प्रहरी कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेलमा बुझ्दा हाल सम्म ९४ जना महिला बेपत्ता छन । त्यस मध्ये ७० जना फेला परेका छन । पछिल्लो आर्थिक बर्षमा १० जना महिला हराएको उजुरी पुरुषहरुले पारेका छन ।
बालिका १७ जना हराएकोमा १७ जना नै फेला परे । लामो समय देखि त्यस सेलमा काम गरेकी प्रहरी जवान झर्ना परियार भन्छिन भेटिनेहरु मध्ये धेरै जसोले बिबाह गरेर गएँ भन्छन । अर्का प्रहरी जवान यशोदा खनालका अनुसार पछिल्लो पटक हराएका मध्ये ७ जना फेला परेका छन । मुसिकोट नगरपलिका–२, चौरका रामबहादुर बिककी श्रीमती घरबाट भागेको करिव ३ महिना भयो । चार सन्तान मध्ये डेढ बर्षको सन्तान लिएर हिडेकी उनि बेपत्ता छन ।
उनको नम्वरमा फोन जान्छ । आफुले उठाउँदैनन अरुलाई उठाउन दिएर थाह छैन भन्न लगाउँछिन । बिकको तिन सन्तानको बिचल्ली भए पछि धेरै पटक उनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आए तर पत्ता लगाउन सकेका छैन । यस्ता तमाम महिला घरबाट बेपत्ता हुँदा बिशेष गरी बढि मात्रमा बैदेशिक राजगारमा गएका पुरुषहरु जलनमा पर्ने गरेका छन भने वालवालिकाको विचल्ली हुँदै आएको छ ।
झापाली समाज युएईको कार्यक्रमका लागि कलाकारहरु युएई अवतरण, कार्यक्रमको तयारी पूरा !